Yeyiphi iNdlu yeHogwarts Ngaba uphawu lwakho lweZodiac Lukulo? - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
Abalandeli bakaHarry Potter, i-Hogwarts Sorting Hat ingathatha njani isigqibo sokuba yeyiphi indlu uphawu lwakho lwe-zodiac ekufuneka luhlelwe ngayo? Leliphi iqela elifanele ubuntu bakho?
UHarry Potter libali lewizard encinci ephawule isizukulwana sabalandeli. Ukuba uyinto enje ngathi, mhlawumbi sele ulinde ngolangazelelo isikhova ukuba sihambise ileta evela eHogwarts School of Witchcraft and Wizardry iminyaka eliqela. Ngaba uphawu lwakho lwe-zodiac nguGryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, okanye uSlytherin? Ekuvavanyeni iiprofayili zeenkwenkwezi, sinokufumana ukuba yeyiphi indlu yeHogwarts efanelekileyo kubuntu bakho. Abanye benu banokumangaliswa!
Lixesha lokuba uphinde uqhagamshele kunye namaphupha akho obuntwana kwaye ufumane apha ukuba nguwuphi uHarry Potter ongumlinganiswa wakho we-zodiac yakho. Olunye uphawu lweenkwenkwezi lusisikelela ngeempawu ezahlukeneyo kwaye iintlobo zobuntu , ke ngekhe kuphambane ukucinga ukuba banendima enkulu abayidlalayo kuMsitho wokuHlela.
Zeziphi iiHogwarts onokuba lilungu kuzo?
Ke, nxiba iingubo zakho ezinde, uthathe i-Butterbeer, ulinde uNjingalwazi McGonagall abize igama lakho. Lixesha lokuba ukhuphe Ukuhlela Ha kuba ikamva lakho sele liza kutywinwa . Lixesha lokuba ungene kweli hlabathi lingaqondakaliyo kwaye uphile ngobuqili bethu bewizarding!
Umnqwazi wokuHlela uthi ... iiAries
IiAries zezona Gryffindors zokugqibela. Inesibindi, inomdla, kwaye iyaphuma , Abo bazalwa phantsi kweAries bazalelwa ukukhokela ngaphambili kwaye banokulingana ngaphandle kwendlu kaHogwarts. Banokuba notyekelo lokuzonwabisa kancinci amaxesha ngamaxesha, kodwa kwaneyona Gryffindors ityebileyo ine-streak yekratshi.
Ukwahlula umnqwazi uthi ... iTaurus
Abantu baseTaureans bakwiHufflepuff
AmaTaurean zezona zinenkani kunene zeempawu zeenkwenkwezi, ezenza ukuba zilungele iHufflepuff. Ama-Hufflepuffs aziwa ngawo ubunzima obunzima kunye nokuzingisa , kwaye abantu baseTaurean baya kuba benza kakuhle ukuzingqonga nabantu abasebenza nzima.
Umnqwazi wokuHlela uthi ... iGemini
Ngomqondo onobuqili kunye nolwimi olubukhali, uGeminis wayeza kuhlala ngokulula emhadini waseSlytherin. Bambalwa ababalwa njengeGeminis, kunye nabo ukukwazi ukufihla iimvakalelo zabo kuthetha ukuba bazakufika emagxeni amahle wokurabha izinto ezinje ngoSnape noMalfoy.
Umnqwazi wokuHlela uthi ... Umhlaza
Xa inomdla, iCancer iya kuba yinto efanelekileyo kwiRavenclaw. Umhlaza unemfesane kwaye uhlala uziva ngakumbi kunezinye iimpawu zodiac, ezivumela ukuba zibe njalo uthanda ngokukhethekileyo . Obu buntununtunu kwiimvakalelo buya kuvumela iCancer ukuba ibethe kunye noRavenclaw kaLuna Lovegood.
Umnqwazi wokuHlela uthi ... uLeo
IiLeos ziingonyama ngapha nangapha, ngoko ke ukuzihlela nakweyiphi na enye indlu kunokuba yimpazamo enkulu. Banokulawula kancinci kodwa Ileos ziinkokheli zendalo , ke kuyinto eqhelekileyo ukuba beze kancinci kancinci ngamanye amaxesha. Ukunyaniseka, isibindi, kunye nethemba elingunaphakade, uLeos wazalelwa ukuba abe yiGryffindors.
Umnqwazi wokuHlela uthi ... iVirgo
I-Virgos bathobekile, bacinga ngokukhawuleza, nto leyo ebenza babe ngabagqatswa abafanelekileyo beRavenclaw. Zezinye zezona ngcinga zisengqiqweni malunga, kwaye ukusombulula ingxaki akuyona into eyenye ngaphandle kokudlulisa ixesha. I-Virgos inelifa le- ubuqili kunye nobulumko ezenza iziseko zendlu yaseRavenclaw, kwaye uHlobo lokuHlola luya kuphosakela ukuba luyazilungisa kwenye indawo.
Umkhwa wokuHlela uthi ... iLibra
Banokuba ngabakhohliseka kancinci ngamanye amaxesha, kodwa njengeHufflepuffs, awunakukunceda kodwa uthande iLibras. Ngokumangalisayo unobulungisa kwaye unobubele obungunaphakade, iiLibra zinjalo iglu ebamba wonke umntu ngokudibeneyo , ke iHufflepuff yindlu efanelekileyo kubo.
Ukwahlula umnqwazi uthi ... iScorpio
IiScorpios zinetalente yokwenza izinto zenziwe ngendlela yazo, nokuba oko kuthetha ukuxhaphaza abo babangqongileyo. Ngaba oku kuyakukhumbuza ngaLowo ungamele kubizwa ngegama? Amabhongo kwaye ajolise, iiScorpios zinayo ukuqhubela phambili oko kuhambelana nendlu kaSlytherin.
Umnqwazi wokuHlela uthi ... iSagittarius
I-Sagittarians banethemba elingunaphakade kwaye ngelixa oku kubashiya bevulelekile ekusebenziseni, bahlala bekwazi ukubona okulungileyo nakubantu ababi kakhulu. UCedric Diggory ngumzekelo weklasikhi we-Hufflepuff kunye naye ukuthembeka kunye nekhampasi yokuziphatha efanelekileyo , kwaye ukuba ezi ayizizo iimpawu zeSagittarian ke andazi ukuba yintoni.
Umnqwazi wokuHlela uthi ... iKapricorn
I-Capricorn ayifuni nto ngaphandle kokuphuma phezulu, ibenza ngokungathandabuzekiyo ukuba yenye yezona mpawu zintle zodiac. Babo ubulumko, ubuqili kunye nomonde ibanika indalo yenyoka- ibenza babe ngamalandela afanelekileyo kaSalazar Slytherin.
Umnqwazi wokuHlela uthi ... u-Aquarius
Mna I-nventive, eccentric, kunye nabathandi bokucinga okungabonakaliyo , Indawo ekuphela kwayo eyi-Aquarians kukwigumbi eliqhelekileyo elijikelezwe ziiRavenclaws ezinengcinga efanayo. Ama-Aquarians isenokungabi lolona phawu ludlamkileyo lwe-zodiac, kodwa kunzima ukubacingela kwenye indawo ngaphandle kweendawo zabo zokulala beziqhelanisa nokuthakatha kwabo.
Umnqwazi wokuHlela uthi ... Iintlanzi
Iipisceans zezona zinabantu banemfesane malunga. Ububele kunye ne-intuition yabo yeyona nto ibenza bahluke kwezinye izindlu. Ukuqonda kunye nokuziva kwiimvakalelo zabanye , UHelga Hufflepuff uyakwamkela ukuthamba kweePisceans ngezandla ezivulekileyo.
Ngowuphi umzi olilungu lawo?
U-Lauvuel Ingelosi engumGcini efuzisela uloyiso kunye nobulumko
Isikhundla esivela kweyona ndawo imbi kakhulu ukuya kweyona Zodiac
inani elinentsingiselo ye-12
ngubani ohambelana netaurus
Umhlaza wokuthanda ubomi
Umhlaza weempawu zodiac yindoda
i-aries kunye ne-aries bayayithanda
Intsingiselo ye-222 kunye ne-444